I-UKZN Extended Learning (i-UEL) inemititilizo yamaphakathi nonyaka emakhasimendeni ezifundweni eziqala kuNhlaba (May) nakuNhlangulana (June) ngonyaka wezi-2021.
I-UKZN Extended Learning (i-UEL) inemititilizo yamaphakathi nonyaka emakhasimendeni ezifundweni eziqala kuNhlaba (May) nakuNhlangulana (June) ngonyaka wezi-2021. Kulezizifundo (bheka uhla oluphelele ngezansi) kukhona i-Project Management, eZempilo NezokuPhepha, EzeziMali, i-Supply Chain, i-Emerging Managers nezifundo zokulungiselela ukwenza ezinye.
Imibono yezithunywa namakhasimende iveza ukuthi umvalelwandlini okhona ezweni nokundonda kokukhula komnotho nezingqinamba zemali kulokhu kuyinselelo okungazeki ukuthi izoxazululeka nini.
I-UEL yenza lokhu ukweseka amakhasimende ayo ukuqinisekisa ukuthi izingqinamba zemali aziwancishi ithuba lokuzithuthukisa. Izifundo zesikhashana zizobiza uhhafu ngoNhlaba nangoNhlangulana ebantwini abayofika kuqala. Izinkampani ezingamakhasimende zizohlomula ngezindawo zabantu ababili ngemali yomuntu oyedwa. Lena yindlela encane kodwa ebonakalayo i-UEL ephosa ngayo esivivaneni sokweseka umnotho waseNingizimu Afrika.
Impela nokuphepha kwamakhasimende, abasebenzi nabalingani kuyaqhubeka nokuba mqoka e-UEL, eqhubeka nokwenza izinto ezintsha nokuphucula indlela yokufunda exubile. Amakhasimende ayanxuswa ukuthi axhumane ne-UEL mayelana nosizo aludingayo ukufeza izifiso zentuthuko zezinkampani zazo.
Nazi ezinye izifundo:
Leadership Development Programme (Higher Education) – kusukela mhla we-10 kuNhlaba (May) wezi-2021
Effective Board Leadership Programme – kusukela mhla we-11 kuNhlaba (May) wezi-2021
Emerging Managers Programme – kusukela mhla we-12 kuNhlaba (May) wezi-2021
Managing for Impact – kusukela mhla we-12 kuNhlaba (May) wezi-2021
Finance for Non-Financial Managers – kusukela mhla we-12 kuNhlaba (May) wezi-2021
Advanced Project Management – kusukela mhla we-12 kuNhlaba (May) wezi-2021
Business Communication – kusukela mhla we-17 kuNhlaba (May) wezi-2021
Trade Investment Promotion and Economic Development Programme – kusukela mhla we-20 kuNhlaba (May) wezi-2021
Monitoring, Evaluation and Research Skills Programme – kusukela mhla we-24 kuNhlaba (May) wezi-2021
Safety, Health and Environment (SHE) Management – kusukela mhla we-24 kuNhlaba (May) wezi-2021
Global Supply Chain Management (Focus on Business Risk) – kusukela mhla we-26 kuNhlaba (May) wezi-2021
Board Leadership Programme – kusukela mhla we-27 kuNhlaba (May) wezi-2021
MS Excel Basic – kusukela mhla we-14 kuNhlangulana (June) wezi-2021
Foundation Mathematics – kusukela mhla we-17 kuNhlangulana (June) wezi-2021
Certificate in Advanced Labour Law – kusukela mhla wama-21 kuNhlangulana (June) wezi-2021
Advanced Leadership Development Programme (Higher Education) – kusukela mhla wama-23 kuNhlangulana (June) wezi-2021
1. Zincane izindawo, nguwashiywa
2. Kukhokhwa imali ephelele phambili ngaphambi kokuqala kwezifundo
3. Kunesaphulelo esisodwa esifundweni esisodwa
4. Umuntu angabhalisela ngaphezu kwesifundo esisodwa ngalesisikhathi
5. Umtitilizo ukhona ezifundweni kusukela kuNhlaba (May) kuya kuNhlangulana (June) wezi-2021